Bocas Bali IiVillali zaManzi eziNtofontofo | IBocas del Toro Resorts-Iihotele eziNtofontofo ePanama
Kutheni ndithenge iBlog yeSiqithi
Eyona bhlog yeBocas Del Toro
Impilo & Nokhuseleko
Bocas Bali KwiiNdaba
Iphinda ivulwe ngoSeptemba
Indawo yokuphumla yabantu abadala 16+
Izidlo ze-Epikure kunye neziselo zibandakanyiwe
Akukho Ukurhoxiswa okanye uTshintsho lweMali
“Ukuphila yeyona nto inqabileyo ehlabathini. Uninzi lwabantu lukhona, kuphelele apho. ” -Oscar Wilde
Umyili wezakhiwo u-Andres Brenes, owaziwa kakhulu ngokuyila eyona hotele idlalayo ehlabathini, wenze omnye umsebenzi wobugcisa ohendayo. Ukubona idolophu yaseBocas egcwele umoya eBocas Del Toro, ePanama, kukho indawo engaqhelekanga yokubalekela eBalinese ephefumlelweyo phezu kwamanzi, iBocas Bali, ekhuphisana nezona ndawo zokuchithela iiholide emhlabeni. Umamkeli weendawo ekuchithelwa kuzo iiholide uScott Dinsmore uqinisekisa amava afudumeleyo, angenakulibaleka kwiindwendwe zethu, ezonwabela ukudityaniswa kwethu okungaqhelekanga kokuzenzekela kwindawo entle yeCaribbean.
IWorlds First Aerial Beach
Yakhelwe Phezu Kwamanzi kwiiStilts
Inyathelo ukusuka kwindlela ebanzi yebhodi ukuya ngqo kulwandle iKupu-Kupu, enendawo eza kuba nodumo lweTipsy Bar. Lula ilanga kunye nempepho kwaye uqiniseke ukuba ufumana izinyuko ezifana nedama ezikhokelela kumanzi ashushu angunaphakade acwengileyo eCaribbean xa uqubha emva kwemini.
Iindwendwe zethu zonwabela i-1,100 yeenyawo zesikweri se-alfresco ekhangayo yokuhlala, ukuphumla kwizibonda eziphezu koLwandle lweCaribbean. Ukongeza kwichibi labucala kunye nethafa, i-villa nganye inebhedi yenkosi eneelinen ezihonjisiweyo kunye nelitye elihle lesepha eliqingqwe ngesandla. Ngokwesitayile semveli saseBalinese, amagcisa azinikele ngaphezulu kweeyure ezili-1,000 ekuqingqeni umthi wetek wevilla yonke.
Ukutya kunye neeCocktails
Iindawo zokutyela ezimbini
Amava akho okutya e-The Elephant House kunye ne-Coral Café ixela kwangaphambili imali yokukhwela yesiqhelo equka konke ngokuthanda izithako zasekhaya, ezitsha zasefama kunye nokutya kwaselwandle kwengingqi okufunyenwe kubalobi base-Bocas. Iphefumlelwe yi-greenhouse yethu kwindawo yethu, iinkosi zethu ze-chef masterminds izitya ezintsha ngesidlo ngasinye.
Qubha okanye i-snorkel ngqo kwi-villa yakho ephezu kwamanzi. Okanye ujonge amanzi eCaribbean ajikeleze isiqithi sethu ngekayak okanye ibhodi yokubheqa. Ukufumana amava e-snorkeling eyimfihlo, isiqithi esincinci sinqumla ngokuthe ngqo kwiivillas sibamba ubomi bolwandle obuphefumlayo.
Amanzi aseBocas Bali ashushu unyaka wonke. Kodwa ukuba ukhetha amanzi acocekileyo ngaphezu kwamanzi anetyuwa, ichibi lethu elimangalisayo le-clubhouse yindawo ezolileyo yokutshisa ilanga.
UbuGcisa kunye noYilo lwezakhiwo
Ngee-Undertones ezityebileyo ze-Balinese
Isiqithi esincinci sabucala e-Bocas Del Toro inokuba yindawo yokugqibela onokuthi ulindele ukuba ufumane uyilo olumangalisayo oluqiniswe ngezandla eziqingqwe ngemizobo yamatye esepha kunye neetoni ezimbini zeetoni zeswekile yendalo yomzobo wobugcisa obuhombisa inkundla ye-alfresco. Kwabo bathanda ubugcisa - zininzi izinto ezimangalisayo ezilindeleyo.
Ukukhusela iiCoral Reef zethu
Sinomdla wokugcina ubuhle bendalo besiqithi sethu sabucala kunye namanzi aso. I-Bocas Bali i-100% iphuma kwigridi. Izitya zokuqokelela amanzi emvula zigcina iilitha ezingama-55,000 zamanzi emvula ukubonelela ngazo zonke iimfuno zethu zamanzi acocekileyo acocekileyo. Kwaye ilanga livelisa umbane wethu ngendlela yamandla elanga.
Qhagamshelana neBocas Bali
IBocas Del Toro, ePanama
Jonga i-boutique yethu
Ihotele epholileyo eCosta Rica
© 2018-2022 Bocas Bali | Onke Amalungelo Agciniwe
Iwebhusayithi kunye neefoto ngu Laabs Creative
Imigaqo-nkqubo yeBocas Bali
Amaxabiso aquka konke
Iireyithi zisekwe kwindawo ephindwe kabini okanye enye (akukho kuhlalwa kathathu okanye kane)
Irhafu ayifakwanga ngaphandle kokuba kuphawulwe (i-10% yegumbi kunye ne-7% yokutya neziselo)
Ubuncinci bokuhlala ubusuku obu-2, Ubuncinci bokuhlala ubusuku obu-4 ukusuka nge-20 kaDisemba ukuya nge-2 kaJanuwari
Ipropati yabantu abadala kuphela, iindwendwe kufuneka zibe neminyaka eyi-16 ubuncinane
Konke ugcino kuqinisekiswa nge-imeyile
Kufuneka idiphozithi eyi-50% ukuqinisekisa ugcino. Imali eseleyo ihlawulwa xa uNgena. Ukuba idiphozithi ayigqitywanga kwiiveki ezimbini zogcino, ukurhoxiswa okuzenzekelayo kusebenza.
I-Bocas Bali ayikuhlawulisi ngoku ukurhoxiswa okanye ukutshintsha imirhumo. Nangona kunjalo, ukuba uceba ukurhoxisa. Nceda usazise kwangaphambili kangangoko kunokwenzeka. Kwimeko yokurhoxiswa, i-50% yediphozithi yakho iya kubuyiselwa kwiintsuku ezingama-30.
Umthetho welizwe lasePanama uyakwalela ukutshaya kwiindawo eziqhelekileyo, kwiindawo zokutyela, nakwiibhari. Ukuze iindwendwe zithuthuzeleke, ihotele inomgaqo-nkqubo wokungatshayi kwiindawo eziqhelekileyo, kubandakanywa ichibi lokuqubha, iibhari kunye neendawo zokutyela. Iindwendwe ezitshayayo kufuneka ziqhagamshelane neReception xa zifika kwiindawo ezichongiweyo ukuba zenze njalo. Ungatshaya kwi-terrace yeVilla nganye. Kukho intlawulo ye-$ 200 yokubuyisela igumbi kubantu abangayithobeliyo le polisi.
Nceda unikezele ngolwazi lwakho kunye nemihla onethemba lokuhlala kuyo. Siza kuqhagamshelana nawe kungekudala.
Enkosi ngomdla wakho eBocas Bali. Nceda unikeze igama lakho, inombolo yomnxeba, kunye nedilesi ye-imeyile kwaye siya kukufowunela ngokukhawuleza.